ရခိုင်အရေး သိကြားမင်း ဖြေမရှင်းနိုင် | AAS Burmese
written by အောငျအောငျ March 13, 2019 310 views
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၏ အာရှရေးရာ အထူးကိုယျစားလှယျ မစ်စတာ စှနျးဂျေါရှနျးနှငျ့အဖှဲ့အား ၂၀၁၈ နိုဝငျဘာ ၉ရကျနတှေ့ငျ နပွေညျတျောရှိ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၌ လကျခံတှဆေုံ့စဉျ (ဓါတျပုံ - State Counsellor Office)
ရခိုင်အရေးဟာ မြန်မာနိုင်ငံအဖို့ အင်မတန်အရေးပါပြီး ဒီမိုကရေစီစနစ်ဘက် ဦးတည်နေတာကို အတည်ပြုပေးမယ့် မှတ်ကျောက်သဖွယ် ဖြစ်နေတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးက မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေကို ရခိုင်အရေး အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းပေးစေလိုကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေက သိကြားမင်းဆင်းအလာကို စောင့်နေဟန်တူပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် တရုတ်ကြီးကိုပဲ သိကြားမင်းမှတ်ပြီး အားကိုးနေတာများလား?
ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျဘက်ကို အသက်လုထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဒေါ်လာ ၆ထောင်စီပေးပြီး ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုလားပဲ။ ခိုးဝင်ဘင်္ဂလီတွေပါလို့ ၂၀၁၀ကတည်းက ဝါဒဖြန့်၊ မီးရှို့ဖျက်ဆီး၊ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင် မတရား သတ်ဖြတ်တဲ့အပြင် စစ်တပ်က ဖွဲ့ထားတဲ့ ARSA အုပ်စုကို ဗန်းပြပြီး လူပေါင်း၇သိန်းကျော်ကို အတင်းအဓမ္မ နှင်ထုတ်ခဲ့တယ်။ နိုင်ငံတကာက တရားခံတွေကို ICC တင်မယ်လုပ်တော့မှ အရပ်ကူပါ ရွာကယ်ပါနဲ့ တရုတ်ကြီး အကူအညီယူပြီး ကိုယ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ ရာဇဝတ်မှုကနေ ရှောင်ဖို့ ကြိုးစားကြပြန်တယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းလိုရင်တော့ သိကြားမင်းကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဖြေရှင်းလည်း ရမှာမဟုတ်။
ရက္ခိုင်တပ်မတော်က ရခိုင်ပြည်သူတွေကို ဝေသာလီကုလားတံဆိပ်ပါ ရခိုင်အလံထောင်ခိုင်းပြီး ရခိုင် အဖနိုင်ငံထူထောင်ဖို့ စိတ်ကူးနေကြတယ်။ ရခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကလည်း ဗမာခေါင်းဆောင်တွေလိုပဲ ရခိုင်အရေးကို ဖြေရှင်းလိုစိတ်မရှိ။ ဒီကနေ့အထိ တိုင်းရင်းသားတွေပါလို့ လူသိရှင်ကြား ကြေညာထားတဲ့ ကမန်တိုင်းရင်းသားတွေတောင် အလုပ်လုပ်ခွင့်၊ ကျောင်းတက်ခွင့်မရသေး၊ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးတွေနဲ့ ရဲတွေက လုံခြုံရေးတာဝန်မယူနိုင်လို့တဲ့။
ကမန်တိုင်းရင်းသားတွေလည်း အကျဉ်းစခန်းထဲရောက်နေလို ပိတ်လှောင်ခံထားရတယ်။ နိုင်ငံတော် ပေါ်လစီအရ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ခိုးဝင်ဘင်္ဂလီတွေသာဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံတော်ပိုင် မီဒီယာတွေက ဝါဒဖြန့်တာလဲ ဒီကနေ့အထိ မရပ်တန့်သေးဘူး။ နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့တိုင်း “လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမရှိဘူး၊ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှု၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေ မရှိပါဘူး၊ ဒို့က ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တဲ့ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါ” လို့ ပြောပေမဲ့၊ ဒီကနေ့အထိ “မြေမျို၍ လူမျိုးမပျောက် လူမျိုမှ လူမျိုးပျောက်မည်” ဆိုတဲ့ နာဇီဆောင်ပုဒ်ကို လဝကရုံးတိုင်းမှာ ချိတ်ထားတယ်၊ ဘာသာလူမျိုးအပေါ်အခြေခံပြီး နှိပ်ကွပ်လိုတဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုတည်းကြောင့် အဲ့ဒီလိုချိတ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။
မေတ္တာတရားရှေ့ထားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလို့ပြောပေမဲ့ မဘသအကြမ်းဖက် အုပ်စုရဲ့ အမုန်းတရားတွေကိုတော့ ဆက်လက်အာပေးနေဆဲ။ပါတီတိုင်းနဲ့ ခေါင်းဆောင်တိုင်းက ၂၀၂၀အတွက် ပြင်ဆင်နေကြတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံး တရုတ်လက်ထဲ ပုံအပ်ရမယ်ဆိုလည်း သူတို့ကောင်းစားရေးကိုသာ ဦးစားပေးလိုကြတယ်၊ ပြည်သူတွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းပေးလိုတဲ့ ဆန္ဒရှိဟန်မတူဘူး။ ပြည်သူအားလုံးကို တန်းတူအခွင့်အရေးပေးဖို့ မစဉ်းစားသေးဘူး။ ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သာ ဆက်သွားနေရင်တော့ သိကြားမင်းကြိုးစားလည်း ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်လာစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ မူလဘူတအခွင့်အရေးတွေ မပေးမချင်း သိကြားမင်းလည်း ရခိုင်အရေးကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်။
ရခိုငျအရေး သိကွားမငျး ဖွမေရှငျးနိုငျ
ရခိုငျအရေးဟာ မွနျမာနိုငျငံအဖို့ အငျမတနျအရေးပါပွီး ဒီမိုကရစေီစနဈဘကျ ဦးတညျနတောကို အတညျပွုပေးမယျ့ မှတျကြောကျသဖှယျ ဖွဈနတေယျ။ ကမ်ဘာတဈဝှမျးလုံးက မွနျမာခေါငျးဆောငျတှကေို ရခိုငျအရေး အမွနျဆုံး ဖွရှေငျးပေးစလေိုကွတယျ။ ဒါပမေဲ့ မွနျမာခေါငျးဆောငျတှကေ သိကွားမငျးဆငျးအလာကို စောငျ့နဟေနျတူပါတယျ။ ဒါမှမဟုတျ တရုတျကွီးကိုပဲ သိကွားမငျးမှတျပွီး အားကိုးနတောမြားလား?
ဘင်ျဂလားဒခြေျ့ဘကျကို အသကျလုထှကျပွေးခဲ့ရတဲ့ ရိုဟငျဂြာတှကေို ဒျေါလာ ၆ထောငျစီပေးပွီး ပွနျချေါမယျဆိုလားပဲ။ ခိုးဝငျဘင်ျဂလီတှပေါလို့ ၂၀၁၀ကတညျးက ဝါဒဖွနျ့၊ မီးရှို့ဖကျြဆီး၊ ဖမျးဆီးခြုပျနှောငျ မတရား သတျဖွတျတဲ့အပွငျ စဈတပျက ဖှဲ့ထားတဲ့ ARSA အုပျစုကို ဗနျးပွပွီး လူပေါငျး၇သိနျးကြျောကို အတငျးအဓမ်မ နှငျထုတျခဲ့တယျ။ နိုငျငံတကာက တရားခံတှကေို ICC တငျမယျလုပျတော့မှ အရပျကူပါ ရှာကယျပါနဲ့ တရုတျကွီး အကူအညီယူပွီး ကိုယျကြူးလှနျထားတဲ့ ရာဇဝတျမှုကနေ ရှောငျဖို့ ကွိုးစားကွပွနျတယျ။ ဒီလိုနညျးနဲ့ ပွဿနာကို ဖွရှေငျးလိုရငျတော့ သိကွားမငျးကိုယျတိုငျ ပါဝငျဖွရှေငျးလညျး ရမှာမဟုတျ။
ရက်ခိုငျတပျမတျောက ရခိုငျပွညျသူတှကေို ဝသောလီကုလားတံဆိပျပါ ရခိုငျအလံထောငျခိုငျးပွီး ရခိုငျ အဖနိုငျငံထူထောငျဖို့ စိတျကူးနကွေတယျ။ ရခိုငျခေါငျးဆောငျတှကေလညျး ဗမာခေါငျးဆောငျတှလေိုပဲ ရခိုငျအရေးကို ဖွရှေငျးလိုစိတျမရှိ။ ဒီကနအေ့ထိ တိုငျးရငျးသားတှပေါလို့ လူသိရှငျကွား ကွညောထားတဲ့ ကမနျတိုငျးရငျးသားတှတေောငျ အလုပျလုပျခှငျ့၊ ကြောငျးတကျခှငျ့မရသေး၊ ကြောငျးအုပျဆရာကွီးတှနေဲ့ ရဲတှကေ လုံခွုံရေးတာဝနျမယူနိုငျလို့တဲ့။
ကမနျတိုငျးရငျးသားတှလေညျး အကဉျြးစခနျးထဲရောကျနလေို ပိတျလှောငျခံထားရတယျ။ နိုငျငံတျော ပျေါလစီအရ ရိုဟငျဂြာတှကေို ခိုးဝငျဘင်ျဂလီတှသောဖွဈတယျလို့ နိုငျငံတျောပိုငျ မီဒီယာတှကေ ဝါဒဖွနျ့တာလဲ ဒီကနအေ့ထိ မရပျတနျ့သေးဘူး။ နိုငျငံတကာခေါငျးဆောငျတှနေဲ့တှတေို့ငျး “လူမြိုးရေးခှဲခွားမှုမရှိဘူး၊ ဖိနှိပျခြုပျခယျြမှု၊ ရကျစကျကွမျးကွုတျမှုတှေ မရှိပါဘူး၊ ဒို့က ယဉျကြေးသိမျမှတေဲ့ မွနျမာဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတှပေါ” လို့ ပွောပမေဲ့၊ ဒီကနအေ့ထိ “မွမြေို၍ လူမြိုးမပြောကျ လူမြိုမှ လူမြိုးပြောကျမညျ” ဆိုတဲ့ နာဇီဆောငျပုဒျကို လဝကရုံးတိုငျးမှာ ခြိတျထားတယျ၊ ဘာသာလူမြိုးအပျေါအခွခေံပွီး နှိပျကှပျလိုတဲ့ ဆန်ဒတဈခုတညျးကွောငျ့ အဲ့ဒီလိုခြိတျထားခွငျးဖွဈတယျ။
မတ်ေတာတရားရှထေ့ားတဲ့ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတှလေို့ပွောပမေဲ့ မဘသအကွမျးဖကျ အုပျစုရဲ့ အမုနျးတရားတှကေိုတော့ ဆကျလကျအာပေးနဆေဲ။ပါတီတိုငျးနဲ့ ခေါငျးဆောငျတိုငျးက ၂၀၂၀အတှကျ ပွငျဆငျနကွေတယျ။ တဈနိုငျငံလုံး တရုတျလကျထဲ ပုံအပျရမယျဆိုလညျး သူတို့ကောငျးစားရေးကိုသာ ဦးစားပေးလိုကွတယျ၊ ပွညျသူတှေ ရငျဆိုငျနရေတဲ့ ပွဿနာတှေ ဖွရှေငျးပေးလိုတဲ့ ဆန်ဒရှိဟနျမတူဘူး။ ပွညျသူအားလုံးကို တနျးတူအခှငျ့အရေးပေးဖို့ မစဉျးစားသေးဘူး။ ဒီလိုပုံစံမြိုးနဲ့သာ ဆကျသှားနရေငျတော့ သိကွားမငျးကွိုးစားလညျး ဒီမိုကရစေီနိုငျငံဖွဈလာစရာ အကွောငျးမရှိဘူး။ ရိုဟငျဂြာတှရေဲ့ မူလဘူတအခှငျ့အရေးတှေ မပေးမခငျြး သိကွားမငျးလညျး ရခိုငျအရေးကို ဖွရှေငျးပေးနိုငျမှာမဟုတျ။